१५ औं आहा ! रारा गोल्डकपमा सहारा क्लबको विजयी सुरुवात
पोखरा ४ माघ । १५ औं आहा ! रारा गोल्डकपमा आयोजक सहारा क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ । पोखरा रंगशालामा आजदेखि सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजकको टिमले सुदुरपश्चिम ११ स्पोर्टिङ क्लबलाई ४- ० ले गोल अन्तरले हराउदै क्वाटरफाईनलको यात्रा तय गरेको हो । खेलको छैटौ मिनेटमै विदेशी खेलाडी मार्टिनको…
पोखरा, ३ माघ- तमु जातिको ऐतिहासिक र पर्यटकीय गाँउ सिक्लेसमा भइरहेको सिक्लेस युवा क्लवको २२ औं वार्षिकोत्सव तथा सिक्लेस माघे संक्रान्ति मेलामा आयोजित तमुहरुको परापरागत छेलो प्रतियोगितामा स्याङ्जा टक्सारका निरज तमु प्रथम र स्याङजा मनकामनाका राजेश तमु दोश्रो हुनु भएको छ । एक शताब्दा भन्दा अघिदेखि सिक्लेसमा परम्परागत रुपमा सञ्चालन…
स्पेनिस ला लिगाको गए रातिको खेलमा सेभिल्ला २–१ ले बिजयी
माघ ३ । कीर्तिमानी ४० खेलमा अपराजित रहेको रियल मड्रिडको पराजित भएकबो छ । स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा रियल मड्रिड सेभिल्लासँग २–१ ले पराजित भएको हो । रियल मड्रिडको हारमा सर्जियो रोमोसको आत्मघाती गोल र म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्व खेलाडी स्टिभव जोवेटिकको गोल निर्णायक बन्यो । सेभिल्लाको मैदानमा…
बिमल घर्तीमगर स्पेनीस क्लबमा ‘ट्रयाल’ का लागि भोलि सोमबार म्याड्रिड उड्दै
नेपालका युवा स्ट्राइकर बिमल घर्तीमगर स्पेनीस क्लबमा ‘ट्रयाल’ का लागि सोमबार म्याड्रिड उड्दैछन्। गत वर्ष बेल्जियमको क्लब ब्रुग केभीबाट व्यवसायिक फुटबल खेलेका विमल करिब ५ महिना लामो नेपाल बसाइँपछि युरोपेली क्लबमा पुनः आफ्नो भविष्य खोजीका लागि स्पेन उड्न लागेका हुन्। उनले स्पेनमा मार्बेला युनाइटेडमा करिब दुई महिना अभ्यास गर्ने छन्।…
स्पेनिस कोपा डेल रे अन्तर्गतको खेलमा रियल मड्रिड र सेभिल्ला बराबरीमा
पुस २९ । गएराति भएको स्पेनिस कोपा डेल रे अन्तर्गतको खेलमा रियल मड्रिड सेभिल्लासँग बराबरीमा रोकिएको छ । निकै प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको यी दुईबिचको खेल ३–३ को बराबरीमा सकिएको हो । खेलको अतिरिक्त समय अर्थात ९३ औं मिनेटमा करिम बन्जामले गोल गर्दै रियललाई बराबरीमा ल्याएका हुन् । बरीबरी गरेसँगै रियल मड्रिडले नयाँ…
लिग कप फुटबलको सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा साउथह्यामप्टन बिजयी
पुस २८ । साउथह्यामप्टनले इ एफ एल लिग कप फुटबलको फाइनलमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ ।बुधबार राति भएको सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा साउथह्यामप्टनले लिभरपुललाई १–० ले हराएको छ । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा साउथह्यामप्टनलाई जिताउन २० औं मिनेटमा नाथन रेडमोण्डले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । प्रिमियर लिगमा शीर्ष स्थानको होडमा रहेको…
म्यानचेस्टर युनाइटेड लिग कपको फाइनल नजिक
पुस २७ । म्यानचेस्टर युनाइटेड इएफएल कप ९लिग कप० फुटबलको फाइनल नजिक पुगेको छ । मंगलबार राति भएको सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले हल सिटीलाई २–० ले हराएको छ । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा जोसे मोरिन्होको टिम म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो । तर दोस्रो हाफमा आन…
विश्व फुटबल महासंघद्वारा आगामी विश्वकप फुटबलमा ४८ टोलीको सहभागिता गराउने प्रस्ताव पारित
२६ पुस, काठमाडौं । विश्व फुटबल महासंघले गरेको आगामी २०२६ को विश्वकप फुटबलमा ४८ टोलीको सहभागिता गराउने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । विश्वकपलाई बिस्तार गर्नका लागि दिइएको पाँच बिकल्पहरुमध्ये फिफा काउन्सिलका ३७ सदस्यहरुबीच गराइएको मतदानमा ४८ टोली सहभागी गराउने प्रस्तावले बहुमत पाएको हो । २०२६ को विश्वकपमा ४८ मुलुकका…
अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकप फुटबलको उपाधि आर्मीलाई
मकवानपुर, पुस २३ । नेपाल आर्मीले हेटौँडामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकप फुटबलको उपाधि जितेको छ । शनिबार भएको फाइनलमा मनाङ्ग मस्र्याङदीलार्इु २–० ले हराउँदै आर्मीले प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो । आर्मीलाई जित दिलाउन भरत खवास र सन्तोष तामाङ्गले गोल गरे । त्यस्तै झापा ११ ले मेची नेत्रालय काँकडभिट्टा गोल्डकप फुटवलको उपाधि जितेको…
पोखरामा शंकास्पद बस्तु भेटियो
जापान र सेनेगलको पहिलो हाफ १-१ गोलको बराबरीमा सकियो
अमेजनमा सामान अर्डर गर्दा रोबोटले गर्न थाल्यो डेलिभरी
रेष्टुरेण्टहरुमा लिइँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णय